Inona no maha samy hafa ny sarontava amin'ny fandidiana fitsaboana sy ny saron-tava N95?
Ny sarontava amin'ny fandidiana ara-pitsaboana dia afaka mitoka-pototra lehibe toa ny vongan-drano, ary ny sosona ivelany dia sosona tsy tantera-drano, izay afaka manakana ny famaohana rano. Saingy, ny sarontava amin'ny fandidiana dia tsy afaka manivana tsara ireo sombintsombiny tsara amin'ny rivotra, ary tsy voaisy tombo-kase ny endrik'ilay sarontava, ary tsy afaka misoroka tanteraka ny rivotra tsy hiditra amin'ny banga eo amoron'ny sarontava.
Ny saron-tava N95 dia saron-tava miaro ny vovoka, izay afaka manivana fantsona matevina na ranoka misy savaivony 0,3 micrometre na mihoatra. Na izany aza, isaky ny manao saron-tava N95 ianao dia tsy maintsy mizaha toetra ny tery amin'ny sisin'ny sarontava (Fit Test) hahazoana antoka fa tsy misy famoahana rivotra. Vokatry ny fiarovana tena izy. Noho izany, ny saron-tava N95 dia tsy mety amin'ny olona manana volo amin'ny tarehy sy ny zanany, satria ireo olona ireo dia tsy afaka manome antoka ny hamafin'ny fanaovana sarontava N95.
Ho fanampin'izay, ireo olona manana aretin'ny taovam-pisefoana, aretim-po, na olon-kafa manana olana amin'ny fifohana rivotra dia tokony manatona ny dokotera alohan'ny hampiasàna ny mason-koditra N95, satria ny saron-tava N95 dia hanasarotra ny fisehan'ilay mitondra.
Ahoana ny fomba hisafidianana ny sarontava mety?
Raha ny mikraoba dia ampitaina amin'ny alàlan'ny vongan-drano lehibe (ohatra, ny marary dia manaparitaka vongan-dranomaso avy amin'ny fitsikana na kohaka amin'ny olon-kafa), dia mety kokoa ny manao sarontava fandidiana tsy tantera-drano mahazatra ho fiarovana.
Raha somary bitika ny poti-mikraoba na akora manimba ary azo ahantona mandritra ny fotoana maharitra eny amin'ny habakabaka, maro amin'izy ireo no azo ampitaina amin'ny alàlan'ny rivotra, dia ho tsara kokoa ny fiatraikany miaro amin'ny fanaovana maska ​​indostrialy N95. Ny sarontava N95 dia ny tuberculosis nankatoavin'ny CDC, ny SARS ary ny saron-tava hafa fiarovan-tena faran'izay kely indrindra ho an'ny aretina;
Izahay dia mivarotra sarontava fitsaboana sy KN95.
Raha mila sarontava ianao dia aza misalasala mifandray
Telefaona: + 86-791-86372550
Fotoana fandefasana: Mar-27-2020